भगवान ! टिकटकमा निकै नै भाइरल बनेका यी क्युट बालकलाई हेर्नुस; को हुन् उनी?(हेर्नुस् भिडियो) – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/भगवान ! टिकटकमा निकै नै भाइरल बनेका यी क्युट बालकलाई हेर्नुस; को हुन् उनी?(हेर्नुस् भिडियो)
भगवान ! टिकटकमा निकै नै भाइरल बनेका यी क्युट बालकलाई हेर्नुस; को हुन् उनी?(हेर्नुस् भिडियो)
त्यस्तै अहिले पछिलो समयमा एकजना नाबालक पनि टिकटकमा उत्तिकै लोकप्रिय छ्न । जन्मजातै आफ्नो २ ओटै हा’त र एउटा खु’ट्टा गु’मा’एका छन । अर्थात उनको हातका दुवैहातका हत्केला छैनन । सुमित पौडेल नाम गरेका यी बालकको अनुहारमा निकै नै चमक देखिएपनि उनको मु’टुभित्रको ब्य’था निकै नै कस्टकर देखिन्छ । तर विचरा यी अवोध बालकलाइ के थाहा आ’फ्नो पी’डा । तर पनि मुस्कुराइरहेका छन ।
हेर्दा निकै नै क्युट देखिने यी बालकका आफ्ना छुटटै फ्यान फलोइन्ङ रहेका छन । उनलाइ टिकटकमा निकै नै रुचाइएका छन । फलश्वरुप उनको १६ लाख भन्दा बढि लाइक त तीस हजार भन्दा बढि त फलोवर्स नै रहेका छन । अब हेर्नुस यीनै भाग्यमानी बालकाका रमाइला टिकटक भिडियोहरुः
अब प्रधानमन्त्री को बन्छ ? जंगी बाबाले गरे सबै चकित पर्ने भबिस्यबाणी